एनआरएनए अध्यक्षका तीन उमेदवारबिच गम्भिर वार्ता, के छ सहमतिको दस्तावेजमा ? :: NepalPlus
नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७८ पुष १९ गते २१:३७
एनआरएन अनौपचारिक बैठकमा दाहिनेबाट क्रमश: एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसी, एनआरएनए सल्लाहकार कुल आचार्य, एनआरएनए अफ्रिका संयोजक रोशन थापा र एनआरएनए उपाध्यक्ष रबीना थापा । फोटो- रोशन थापाको फेबु
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी निर्वाचनकालागि तिन उमेदवारबिच सोमवार (जनवरी ०३) विशेष बैठक बसेको छ । अध्यक्ष कुमार पन्तले असहमतिका बुँदाहरु पहिल्याएर सहमति खोज्न बनाएको उच्च स्तरिय समिति, अध्यक्षका तिन उमेदवार र अध्यक्ष कुमार पन्तबिच बैठक भएको हो ।
अध्यक्ष कुमार पन्तले असहमतिका बुँदाहरु पहिल्याएर सहमति खोज्न गठन गरेको उच्च स्तरित समितिमा संघका सचिव गौरीराज जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित र डा. यादव पण्डित छन् ।
एनआरएनएका बिभिन्न क्षेत्रका संयोजक, विभिन्न पदका केन्द्रिय पदाधिकारी लगायत तिन जना अध्यक्षका उमेदवारका प्रतिनिधीहरुबिच पहिले अनौपचारिक छलफल भएको थियो । छलफल निर्वाचन र महाधिवेशनमै केन्द्रित थियो ।
अनौपचारिक छलफल पछि अध्यक्ष कुमार पन्तले अध्यक्षका तिन प्रत्यासी डा. बद्रि केसी, कुल आचार्य र रबीना थापालाई विवाद समाधान उच्चस्तरिय समितिसहित गोप्य बैठकमा लगे ।
बैठकमा निर्वाचनमा जाने र त्यसकालागि हाल प्रमुख विवाद रहेको प्रतिनिधि छनौटको विषयमा छफलफल शुरु भयो । समस्याको पहिचान, छलफल र सहमति गराएर टुंग्याउन समिति बनाएको र समितिले प्रतिनिधि छनौटका विषयमा समाधानको सुझावसहित दस्तावेज दिएको पन्तले सुनाए ।
के के हुन् सहमतिका बुँदा ?
छलफलपछि उच्च स्तरिय समितिले दिएको सुझाव अनुरुप प्रतिनिधि छनौटको विषय टुंग्याउन आफूहरु सहमत भएको डा. बद्रि केसी र रबीना थापाले बताएका थिए । तर कुल आचार्यले भने भोली अर्थात् मंगलवार (जनवरी ४) मा फेरि बैठक बस्ने प्रस्ताव गरेपछि बैठक भोलिपल्ट बस्ने भन्दै टुंगिएको थियो ।
उच्चस्तरिय समितिले दिएको सुझाव अनुरुप सहमति भएमा जनवरीमै निर्वाचन गरिने भएको छ । केन्द्रिय समितिले प्रतिनिधि छनौटको सूची दिएको करिब २० दिनमा निर्वाचन समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर निर्वाचन गर्न सक्ने एनआरएनए निर्वाचन समितिले यस अघिनै बताइसकेको छ ।
हाल भैरहेका अनेक वार्ता, गोप्य र खुला छलफलमा प्रतिनिधि छनौटको टुंगो लगाएर छिटै निर्वाचनमा जानुपर्ने दबाब र आकांक्षा बढिरहेको छ ।